कोरोनाबारे के भन्छन् संक्रमण मुक्त भएका चिकित्सक? « Salleri Khabar
कोरोनाबारे के भन्छन् संक्रमण मुक्त भएका चिकित्सक?
२२ भदाै, काठमाडाैँ – कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमणमुक्त भएका विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले यसलाई केही होइन भन्ने रुपमा लिनु नहुने बताएका छन्।
विराट मेडिकल कलेजले सय बेड कोभिड अस्पतालका लागि छुट्याएको डा. कार्कीले बताए। ”कसैलाई कोरोना लागेमा मनोबल गिराउने काम गर्नु हुँदैन” उनले भने, “एक दुई पटक गर्दा गल्ती तर पटक पटक गर्दा त्यही कुरा अपराध हुन्छ।”